Izikhokelo zokugcina i-Notebook yeLebhu
Indlela yokugcina i-Notebook yeBhodi
Izikhokelo zeeNcwadi zeeLebhu
Incwadana yebhabari yirekhodi yakho ephambili yocwaningo lwakho kunye nokuvavanya. Qaphela ukuba ukuba uthatha inkqubo ye-AP yokubeka i-lab, kufuneka uvelise incwadana yeebhan yefanelekileyo ukuze ufumane i-AP yekredithi kwiikholeji ezininzi nakwiiyunivesithi. Nolu uluhlu lwesikhokelo esichazela indlela yokugcina i-notebook yebhu.
Inqaku kufuneka liboshwe ngonaphakade. Akufanele kube yiqabunga elivulekileyo okanye kwi-binder 3-ring.
Ungalokothi uqhekeze iphepha ngaphandle kwincwadi yeebhu. Ukuba wenza iphutha, ungayinqumla, kodwa akufanele ususe ama-sheets okanye iingxenye zeeshici ezivela kwincwadi yakho. Xa uwela iphoso, kufuneka uqhubekekile. Kufuneka uchaze isizathu sokuba uhlalutye kwaye kufuneka uqale kwaye uwenze umhla.
Thatha amanqaku kwinto engunaphakade. Akwamkelekanga ukuthatha amanqaku kwipenki okanye inki ehlawulelwayo.
Phrinta igama lakho, ulwazi loqha ga mshelwano, umhla kunye nolunye ulwazi olufanelekileyo kwiphepha lebhu lebhu. Ezinye iincwadi zeebhanki zifuna ukuba ufake ezinye zeenkcukacha kwiphepha leencwadi.
Ukuba incwadi yakho ayibhalwe ngaphambili, inombolo nganye ngephepha. Ngokuqhelekileyo, amanani akhona ekhoneni elingaphezulu kwaye zombini phambili nangemva kwephepha ngalinye libaliwe. I-lab yakho okanye umqeqeshi unokuba nomgaqo ngokuphathelele ukubala. Ukuba kunjalo, landela imiyalelo yabo.
Yilungileyo elifanelekileyo lokugcina isibini sephepha lokuqala kwisiqulatho.
Qalisa iphepha elitsha kwilingo ngalinye.
Kwimvavanyo nganye, rekhoda umhla (s) kwaye uluhlu lwabalingani bebrabhu, ukuba lukhona.
Ukurekhoda zonke iinkcukacha zangethuba. Musa ukulinda ukuzalisa ulwazi. Kungaba nzima ukurekhoda idatha kwenye indawo uze uyibhale kwi-lab yakho yeencwadana, ngokuqhelekileyo kuba iya kwenza ukuba incwadi ifumaneke, kodwa kubalulekile ukuyirekhoda ngokukhawuleza.
Faka iitshathi, iifoto, iirafu kunye nolwazi olufanayo kwi-notebook yakho yebhu. Ngokuqhelekileyo, uyayibamba apha okanye ufake ipokothwa kwidatha yedatha. Ukuba kufuneka ugcine enye idatha kwincwadi ehlukile okanye kwenye indawo, phawula indawo ebhokisini yakho yebhabhi kwaye uyiqwalasele ngokubhekiselele kumanani ephepha encwadi yeebhan echaphazelekayo apho kukho idatha igcinwa khona.
Ungashiyi ikhefu okanye indawo emhlophe kwibhuku lebhu. Ukuba unendawo enkulu evulekile, yiwela. Injongo yale nto ke akukho mntu unokubuyela ngaphakathi kwaye ungeze iinkcukacha zobuxoki ngomhla ozayo.
Ezinye izibonelelo zamabhanki
Indlela yokubhala ingxelo yeLebhu
Isalathisi seNgxelo yeLeb
Iibhodi zoKhuseleko kwiLeb
I-Chemistry Pre Lab
ULeb yoKhuseleko lweQebhu
I-Bioturbation: Ziziphi izityalo nezilwanyana ezitshintsha i-Surface yePlanethi
Ngaba Ingxaki Yobumnyama?
Yintoni i-Borax kwaye Ungayifumana phi?
I-Galvanic Cell Definition (i-Voltaic Cell)
I-Universe yaqala njani?
Indlela yokulinganisa iIonic Equations
Iingcebiso zokukhumbula imisebenzi yasekhaya
Bhala Ingqalelo-Ukubamba Isivakalisi Esivulekileyo Sesihloko
Uvavanyo lweMveliso yasekhaya
IiFrankoma zeePotter Prices and Values
INguqulelo yaseMelika: Nkosi Charles Cornwallis
Amazwi anomdla malunga nePorpoise
I-Nero Burning Rome
Ukwahlukana phakathi kobuchule kunye nokunyamekela
I-Napoleon kunye neSiege saseToulon 1793
UGeorge Jones, iminyaka eyi-50 yokuPhupha: INgqungquthela ekhethekileyo
Imimangaliso kaYesu: Ukuphilisa umntu ozalelwe eyimpumputhe